DAAWO SAWIRRO: Sidee Jubbaland u sagootisay martidii ka qeybgashay caleema saarka Axmed Madoobe? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Sidee Jubbaland u sagootisay martidii ka qeybgashay caleema saarka Axmed...
DAAWO SAWIRRO: Sidee Jubbaland u sagootisay martidii ka qeybgashay caleema saarka Axmed Madoobe?
Kismaayo (Halqaran.com) – Jubbaland ayaa waxay xalay Magaalada Kismaayo xaflad sagootin ah ugu sameysay martidii maalintii Sabtida ka qaybgashay munaasabadda caleemo saarka ee Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Madaxweynaha Jubbaland oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay in ay sagootin u samaynayan Madaxdii iyo marti sharaftii kale ee ka soo qaybgashay munaasabadda marka labaad loogu cumaamaday xilka Madaxtinimada Jubbaland.
Madaxweynaha oo soo hadalqaaday halka uu dalka marayo ayaa sheegay inaanay maanta Somaliya ka jirin cid beel beel isu haysata, taasina ay tahay mid mar hore laga soo gudbay.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xafladda ay ku sugan yihiin madax dalka soo gaarsiisay halka uu maanta marayo, isla-markaana aan loo baahnayn in dalka dib loo celiyo.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland ayaa Dowladda Somaliya ugu baaqay in laga wada shaqeeyo horu-socodka dalka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa cirka isu shareeray khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland, ka dib doorashadii 22-kii bishii August ka dhacday Magaalada Kismaayo, ee la sheegay in markale lagu soo doortay Axmed Madoobe.
martidii ka qeybgashay